आजको राशिफल (२०७६ आश्विन १५ गते बुधबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन १५ गते बुधबार, इस्वीसंवत अक्टोवर २ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनशुक्लदुर्गापक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनशुक्लदुर्गापक्षको चतुर्थी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज स्वाती नक्षत्र रातिमा ९ बजेर ४७ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा वैधृति, करणमा तैतिल रहनेछ भने आनन्दादि योगमा ध्वज… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ आश्विन १२ गते आइतबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन १२ गते आइतबार, इस्वीसंवत सिताम्वर २९ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनशुक्लदुर्गापक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनशुक्लदुर्गापक्षको प्रतिपदा तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज हस्ता नक्षत्र रातिमा ९ बजेर ४७ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा ब्रह्म, करणमा किंस्तुध्न रहनेछ भने आनन्दादि योगमा मानस… पुरा पढौ
दशैं प्रारम्भ, ९ दिनमा के-के गर्ने ?
आजबाट नेपालीहरूको महान चाड बडादशैं प्रारम्भ भएको छ । दशैंको पहिलो दिन आज घटस्थापना हो । पौराणिक र तान्त्रिक महत्वलाई दृष्टिगोचर गरी दूर्गा भवानीको कृपा तथा आशिर्वाद प्राप्त गर्नका लागि विजयादशमी मनाउने शास्त्रीय विधान छ । शुद्ध माटो तथा गोबरले घर शुद्ध बनाएर शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ मुहूर्तमा घडा स्थापना गरी घडाको नजिक सप्तधान्य (जमरा) बीजारोपण गरी ९ दिनसम्म विभिन्न नामले शक्तिको पूजा आराधना गरिन्छ । त्यस पश्चात् प्रसाद स्वरूप… पुरा पढौ
तपाइँलाई मांगालिक योग दोष छ ?
मांगालिक योग : मानिसको जन्मको समयलाई आधार मानेर तयार पारिने चिना वा जन्म कुण्डली हेरेर यो कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ । मानिस जन्मिएको समयमा मंगल ग्रह सौरमण्डलमा कस्तो अवस्थामा थियो । यसैका अनुसार मांगलिक योग पत्ता लाग्ने गर्दछ । चिनाको लग्न कुण्डलीको १२ वटा भाव मध्ये ५ वटा भाव या घरमा मंगल ग्रह बसेको अवस्थामा मांगलिक योग बन्ने गर्दछ । लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे । पत्नी हन्ति… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ आश्विन ११ गते शनिबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन ११ गते शनिबार, इस्वीसंवत सिताम्वर २८ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्णपितृपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनकृष्णपितृपक्षको चतुर्दशी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र रातिमा ११ बजेर २१ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा शुभ, करणमा चतुष्पद रहनेछ भने आनन्दादि योगमा उत्पात… पुरा पढौ
तपाइँको भाग्य कति वर्षमा चम्कन्छ ?
अंक ज्योतिषमार्फत पनि भविष्यको बारेमा निकै कुरा जानकारी लिन सकिन्छ । अंक ज्योतिषको माध्यमबाट कैयौं समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । साथै यस्ता कुरा पनि जान्न सकिन्छ कि तपाइको भाग्योदय कुन बर्षदेखि सुरु हुन्छ ? यस्ता कुरा जान्नका लागि तपाईलाई तपाइँको जन्ममिति थाहा हुनुपर्छ । जसको माध्यमबाट तपाइको मूलांक (मुख्य अंक) निकाल्न सकिन्छ । कसरी थाहा पाउने मूलांक ? यदि तपाइँको बर्थ डेट १ देखि ९ को बीचमा छ भने यो… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ आश्विन १० गते शुक्रबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन १० गते शुक्रबार, इस्वीसंवत सिताम्वर २७ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्णपितृपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनकृष्णपितृपक्षको चतुर्दशी तिथि रातिमा २ बजेर ४७ मिनेटसम्म त्यसउप्रान्त अमावश्य तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्र रातिमा १ बजेर १ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ आश्विन २ गते बिहीबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन २ गते बिहीबार, इस्वीसंवत सिताम्वर १९ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्णपितृपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनकृष्णपितृपक्षको पञ्चमी तिथि दिनमा ३ बजेर १३ मिनेटसम्म त्यसउप्रान्त षष्ठी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज कृतिका नक्षत्र रातिमा ३ बजेर ३३ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा… पुरा पढौ
बुद्धले महिलालाई यस्तो ज्ञान दिएपछि…
एक महिलाले अल्पायु मै छोरालाई गुमाइन् । उनको जवान छोराको मृत्यु भयो । उनको श्रीमानको पहिल्यै मृत्यु भएको थियो । छोराको मृत्युपछि उनि पागल जस्तै भइन् र आफ्नो पुत्रको शव लिएर गाँउ गाँउमा घुम्न थालिन् । घुम्दै उनि महात्मा गौतम बुद्ध भएको ठाँउ पुगिन् । उनले रुदै बुद्धलाई भनिन्, 'मेरो यो एक्लो छोरा हो । यही मेरे जीवनको आधार हो , यदी यो नरहे मेरा जीवन व्यर्थ छ । कृपया,… पुरा पढौ
आजको राशिफल (२०७६ आश्विन १ गते बुधबार)
आजको पञ्चांग आज मिति २०७६ आश्विन १ गते बुधबार, इस्वीसंवत सिताम्वर १८ तारिक सन् २०१९, श्री शालीबाहनीय शाके १९४१, नेपाल संवत् ११३९, परिधावीनामः संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार आश्विनकृष्णपितृपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आश्विनकृष्णपितृपक्षको चतुर्थी तिथि दिनमा ३ बजेर १३ मिनेटसम्म त्यसउप्रान्त पञ्चमी तिथि अहोरात्र रहनेछ । आज भरणी नक्षत्र रातिमा ३ बजेर ३३ मिनेटसम्म रहनेछ । विष्कुम्भादि योगमा… पुरा पढौ